Oduu Naqqamtee:Ajjeessan ammayyu achumatti dhorkaa jiru!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Naqqamtee:Ajjeessan ammayyu achumatti dhorkaa jiru!!
OMN: (Onk 2020) Guyyaa Kaleessaa Onkoloolessa 23 magaalaa Naqamtee ganda 05 keessatti, waraanni Mootummaa Qeerroowwan shan (5) bakka tokkotti rasaasaan gara laafummaa tokko galaafate.
Qeerroowwan kunniin hiriyoota si’a baayyee bakka tokkotti dabarsaniifi wal biraa hin dhabamne ta’uu jiraataan magaalaa Naqamtee OMN-tti himeera.
Qeerroowwan kana keessaa namni 4 dhalattoota magaalichaa yeroo ta’aan, tokko dhalootaan Dambi Doollloofi guddinaan Naqamteedha jechuun maddi keenya kun ni dubbata. Kaleessa toora sa’a 5 fi daqiiqaa 30 keessa, Humni Addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaan Ittisa Biyyaa sochii Konkolaataa fi namaa magaalaa keessaa ugguruudhaan, paatirooliitiin gara qe’ee ijoolleen kun jiraniitti bobba’e kan jedhu namni kun, turtii daqiiqaa muraasaa booda dhukaasa hamaafi sagalee iyyaatu Ganda 05, bakka Qassoo jedhamuun beekamuu dhaga’amuu eegales jedha.
Ergasii as kan ajjeefame qeerroowwan kanneen ta’uu dhaga’uun hawaasni bakkichatti yoo birmatan, reebichaafi hidhaan maatii ijoollee ajjeefamaniifi namoota birmataniirratti raawwataa tures jedha.
Qeerroowwan kanneen keessaa namni afur (4) bakka tokkotti rasaasaan erga ajjeefamanii booda, saanjaatiin ammoo morma mormarra waraanamuu ija koo guutuutiinan arge kan jedhu ammoo Poolisii Humna Addaa maqaansaa akka dha’amu hin feenedha. Akka poolisiin kun jedhutti, ajjechaan kun ajjechaa tasaa osoo hin taane ajaja qaama olaanuutiin ajandaa qindaa’eefi tasgabbii dhabuu uumuuf akkasumas ammoo uummata rifaasisee afaan cuqqaaluuf kan uumameedha’ jechuun yaada OMN’iif kenne. Qeerroowwan ajjeefaman kunniin, Yisiyaaq Zalaleem, Heenook, Raagu’eel Haayiluu, Famataa, Seefuu Kadir kan jedhamanidha.
Qondaalonnifi miidiiyaleen mootummaa ammoo kan ajjeefame, miseensota Abbaa Torbeeti jechuun dhimmichaaf deebii kan laatan yoo ta’u, miseensi Poolisii Oromiyaa OMN’iif bilbilaan yaada kenne garuu, dhimmichi soba jechuun, ‘kan ajjeefame qeerroo magaalattii keessatti dhageettii qabaniifi qabsoo Oromoo waggoota lama dura ture keessatti ijoollee aarsaa guddaa kaffala turanidha. Utuu isaan Abbaa Torbee ta’anitii silaa eda galgala sochiin baratamaan maqaa abbaa torbeen taasifamu maalif raawwatamare?’ Jechuun erga isaan du’aniis qaamni Abbaa Torbee jedhamu, magaalicha keessatti sochii taasisuusaa hime. Akka inni jedhutti, dubbichii Poolisoota uumama qabaniin muffii kaasee kaampii keessa buufatanitti, rakkinni uumamaa jiraachuu nuuf himee jira.
Reeffi Qeerroowwan ajjeefaman kanaa, bakka itti ajjeefamanii utuu hin kaafamin bulee, sa’a 24 booda amma uummatni jaarsummaatiin awwaalachuuf qophiirra jiraachuu, odeeffannoon garasii arganne ni mirkaneessa.
Ilaalaa cubbuu mootummaa kanaa Reeffi Dargaggoo Abbittii (Yisiyaaq) Zalaalem magaalaa Naqamtetti ajjeefamee bakkee bule, waraanni konkolaataa waan dhorkaniif bifa kanaan gaarii gaangeetti fe’ame Mana maatii geeffamaa jira.
Maanguddoonni magaalaa Naqamtee ganamarraa eegalanii bakka hedduu dhaquun ifaajjee cimaa godhaniin reeffi namoota afurii sa’a 24 booda kaafameera. Ammallee ummanni gara booyicha akka hin dhaqne waraanaan dhorkamaa jira.
Naqamte Ammaa qicame
Reeffa namoota du’anii kennuu didan illee yeroo ammaa kana sochii uummatni taasiseen akka kennamu murteessitee jirti.Garuu Reeffa Zelaalem/Abbittii/ Tamasgeen fe’uudhaaf konkolaataan bakka reeffichaa deemuuf ture akka hin feene waraana pp n waan dhorkameef ,Gaarii fardaatiin akka fe’amu jette.Uummanni garuu ni baadhanna malee gaariidhaan hin fe’amu kan jedhuun walitti bu’insi uumamaa jira.kanaafuu uummanni dhufee reefficha akka baadhannu dhaamsa nuuf dabarsi. Dhaabinsa hojii har’a Naqamtetti taasifameen sa’a 5:00 eegalee suuqii fi kanneen biroo kan dhaabatan yoo ta’e illee Marfata 2ffaa irraa gara Hospitaalaatti kan jiran daldala itti fufanii jiru.Isaaniifis dhaamsa nuuf dabarsi.
Goota Enyuunu kan Bakka Hinbunee!
Waggaa haardhaa kan dubatee, kan dubateef jiraattee!
Ajjeessan ammayyu achumatti dhorkaa jiru
Kaabineen PP Abjuun maraachuu calqaban.
Nagarii Dhaabaa jedhama. Dhimma nageenyaa Aanaa Ambooti.
Torbee darbe Waraana mootummaa Amboo fuudhee Amboo Nyamar geessee WBOn Haxxee hidhee eegee dhukaasa irratti banuun warri inni geessee biraa dhumanii inni boolla keessa seenee dhokatee lubbuun hafe.
Eega Ambootti deebi’ee otuu mana isaa ciisuu Abjuun iyyuu calqabeevciisa dhabe.Guyyaa lama dura Roobii halkan filmii hojjechuu calqabe. Abujuun maraatee halkan keessaa sa’a 6:00 irratti irriba keessaa ka’ee” Natti dhufan ” jechuun yaroo lama gad bahee dhukaase.
Oollaan hundi yaroo dirmataniifii maal taate jedhaniin .Innis kunoo natti dhufan jedhe.Maaltu sitti dhufe ? WBO tu natti dhufe jedhe.Meerre nutoo homaa hin argine jedhee Oollaan gaafte.Of beekee saalfatee callisee manatti deebi’e.
Oollaanis kolfaa gara manatti deebi’an. Eega guyyaa sanaa qaanii keessa galee Oollaa baqataa jira.
Hin bari’u seetee manatti jedhu. Hunduu yaroo qaba.Namichi kun WBOn jedhamitu kun hin jirtu jechaa ture.
kaabinee fi kaadireen na dhokdaa jechuu calqabe.
Guyyichoo dhiyaachaa jiraa Eessatti dhokatu kabinee fi kaadireen ??